ငွေကြေးထက် စိန်ခေါ်မှုကိုအလိုရှိသဖြင့် အာဆင်နယ်ကို ဒေးဗစ်လုဇ် ရွေးချယ်ခဲ့ - Yangon Media Group
ငွေကြေးထက် စိန်ခေါ်မှုကိုအလိုရှိသဖြင့် အာဆင်နယ်ကို ဒေးဗစ်လုဇ် ရွေးချယ်ခဲ့
အာဆင်နယ်နောက်ခံလူ ဒေးဗစ် လုဇ်က မိမိအနေဖြင့် တရုတ်စူပါလိဂ်သို့ သွားရောက်ကစားမည်ဆိုပါက ငွေကြေး ပိုရမည့်အပြင် ပိုပြီးသက်သောင့်သက်သာရှိ နိုင်မည်ဖြစ်သော်လည်း စိန်ခေါ်မှုကိုအလိုရှိ ခြင်းကြောင့် အာဆင်နယ်ကို ရွေးခဲ့ခြင်းဖြစ် ကြောင်း ဆိုခဲ့သည်။
ဒေးဗစ်လုဇ်သည် နည်းပြသစ် လမ်းပတ် လက်ထက်တွင် ပုံမှန် ပွဲထွက်ခွင့်ရရန် မ သေချာဟူသော သတင်းများထွက် ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက် နွေ ဈေးကွက်တွင် အာ ဆင်နယ်သို့ ပေါင်ရှစ် သန်းဖြင့် ရောက်လာသူ ဖြစ်ပြီး ゞင်းဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းခဲ့သည်။
ဒေးဗစ်လုဇ်က ]]ကျွန်တော့်အ နေနဲ့ သက်သောင့်သက်သာရှိမယ့် နေရာကိုရွေးခဲ့ရင် ပိုက်ဆံပိုရပြီး အေး ဆေးနေနိုင်မှာဖြစ်ပေမယ့် စိန်ခေါ်မှုအ သစ်တွေကို လိုချင်ခဲ့တာပါ။ ချဲလ်ဆီးမှာ ပျော်ရွှင်ခဲ့ပြီး လမ်းပတ်နဲ့လည်း သူ့စီမံကိန်း တွေအကြောင်း စကားပြောဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် စိန်ခေါ်မှုအတွက် အာဆင်နယ်ကို ရွေးချယ် ခဲ့တာပါ}}ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
အစားထိုးနိုင်မည့်သူမရှိပါက ပီအက်စ်ဂျီမှ နေမာထွက်ခွာမည် မဟုတ်ဟု တူချယ်ဆို
Bhool Bhulaiyaa2ရုပ်ရှင်ကို ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်တွင် ရုံတင်ပြသမည်
တာချီလိတ်၌ သေနတ်ပစ်ခတ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ စစ်ဆေးရာမှ ထိုင်းနိုင်ငံသား တစ်ဦးထံမှ မူးယစ်ဆေးဝါး?
စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီး ခရီးသွားရက်သတ္တပတ် အစီအစဉ်အောင်မြင်ခြင်း အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ဒေါင်းေ?
မြန်မာ – ထိုင်းပိုင် မယ်ဆိုင်ချောင်း၌ ထိုင်းနိုင်ငံမှရေသွယ်ယူခြင်းနှင့် မြေထိန်းနံရံကာရံ ??
ဇန်နဝါရီတွင် ဆန်း ချက်ဇ်အား ဆုံးရှုံးမည်ကို ဝင်းဂါး စိုးရိမ်ခြင်း မရှိ